Daawo: DF Soomaaliya oo shaacisay xiliga lagu dhawaqayo guddiga Doorashooyinka | SMC
Home WARARKA MAANTA Daawo: DF Soomaaliya oo shaacisay xiliga lagu dhawaqayo guddiga Doorashooyinka
Daawo: DF Soomaaliya oo shaacisay xiliga lagu dhawaqayo guddiga Doorashooyinka
Muqdisho (SMC) – Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markale ka hadashay in weli dowlad goboleedyada qaar soo gudbin Xubnaha ku matalaya Guddiyada heer dowlad Goboleed ee doorashada iyo khilaafaadka.
Wasiirka warfaafinta ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa shaaca ka qaaday in bisha November oo ay naga xigto hal maalin ay guddo geli doonaan dhammeystirka guddiyada doorashada.
Horay waxaa u jiray qaar kamid ah Maamul goboleedyada oo gudbiyay Xubnihii ku matali lahaa Guddiyada heer dowlad Goboleed ee doorashada iyo khilaafaadka, basle ay jiraan Maamul goboleedyo aan soo dhameystirn.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in heshiiskii doorashada ee la gaaray uu qorshuhu ahaa in 10-ka Bisha Octoober Guddiyada la dhammeystiro, hayeeshee cilad farsamo iyo dhisida xukuumadda cusub ay dib u dhaceen.
Sidoo kale, wasiirka ayaa sheegay in Dowladda dhankeeda ay diyaar ka yihiin Xubnaha Guddiyada, basle ay jiraan maamul goboleedyo aan soo dhammeystirin.
Halka hoose ka dhageyso codka Wasiirka Warfaafinta Cusmaan Dubbe.
Previous articleKASHIFAAD: Shaxda isu been guurka siyaasiyiinta Soomaaliya maxay riman tahay?
Next articleDEG DEG-Dhimashada oo 30 ruux ku dhow iyo dagaal ka dhex qarxay Soomaalida & Itoobiya